Manual nokuti vhitamini AD jekiseni [Description] chigadzirwa Uyu Hauoneki kana chiedza tsvuku dzakajeka jikichira zvokunwa. [Rinoshanda uye Use] chigadzirwa ichi chine vhitamini A uye D. ari vhitamini A anogona kushanda sechikamu mberi kukura anima
Kemikari zvinodhaka. chigadzirwa ichi kunogona kukurudzira hove hypophysis kusunungura GTH; kuvandudza hadzi rehove follicle kuti secrete inonzi estrogen izvo zvichakubatsira mhanyisa follicle kukura, ovulation uye kugadzirwa corpus luteum mbeu; kukurudzira dzisingaoneki kugadzirwa uye kukura hove makono. Chiri kumusoro-basa hove odinagogue, kuona efficacy nani kunyanya makomo
Tinovavarira kuva kutungamirira nemakambani kambani ine hwakanakisisa mumunda yedu.
Tichatsvaka zvemberi michina zvenyika uye elites nyanzvi pakusika chemhando yepamusoro uye zvakanakisisa basa, uyewo vawane mukurumbira uye musika mugove pamwe kutendeseka uye kuvimbika zvakanaka uyewo akatsiga unhu.
Ningbo Second Uwandu hwemakemikari Factory kwairatidzwa 1988. We ndakazvipiwa mhuka maberekero indasitiri kwemakore 30, uye isu nokubatanidza mbishi zvinhu, kutsvakurudza uye kukura, gadzira, ongororo, kutengeserana, mutengi kutsigira pamwechete kuva pamwero vachida. boka redu rakanga paakavapa se "Zhejiang High hwemberi mukugadzira indasitiri" uye Cixi Top 20 emakambani "...